Soomaaliya oo safiir u soo magacoowday dalalka Iskaandaneefiyanka 26 sanno ka dib | Somaliska
Dowladda waqtigeeda dhamaaday ee Soomaaliya, ayaa muddo 26 sanno ka dib waxaa ay danjire u soo magacoowday dalalka ku yaqaala waqooyiga Yurub ee Iskaandanfiyeenka la isku yiraahdo.
Danjirahan oo lugu magacaabo Cawaale Cali Kullane, ayaa toddobaadkan hortaantiisi soo gaaray magaaladda Stockholm ee caasimadda Iswiidhan, waxaana xaflad loogu soo dhaweynayo danjiranimadiisa u sameeyey qaar ka mid ah jaaliyadaha soomaaliyeed ee ku dhaqan dalkaan Iswiidhan. Xafladan soo dhaweeynta ah ayaa waxaa sidoo kale goob joog ahaa danjiraha Soomaaliya u fadhiya magaaladda Moosko ee dalkaasi Ruush-ka, Cabdullaahi Maxamuud Warsame oo isagana marti ku ahaa xafladaasi.
Danjire Kullane oo xafladaasi ka hadlay ayaa sheegay in magacaabistiisa ay qeyb ka tahay siyaasadda arrimaha dibadda dowladda Soomaaliya ee qunyar socodka ku dooneyso ineey ku horumariso islamarkaasina fadhigiisuna ahaan doonto magaaladda Stockholm.
Danjirahan ayaa waxaa uu wakiil ka ahaan doona dalalka Iskaandaneefiyeenka oo ay soomaali gaareysa 160 kun ku dhaqan yihiin. Magaciibistiisa ayaa sidoo kale imaneysa xilli eeysan jirin cid wax ka qabata dhibaatooyinka ay soomaalida Iskaanefiyanka kala kulmaan mararka qaarkood shacuubka shisheeye ee ay dalalkooda magansadeen. Waxeey sidoo kale ku soo aadeeysa xilli Noorweey ay horey u sheegtay in sharci ku jooga dalkaasi kala noqonayso soomaali gaarey 1.600 oo qof , kuwaas oo oo qaar ka mid ahiba durbo loo diray waqrigii digniinta ahaa.
Ugu dambeyntii Cawaale Kullane ayaa kal hore soo noqday danjiraha Soomaaliya ee Qarammadda Midoobey, bisha janaayo ee fooda inugu soo heeysa ayaa la filayaa in dhawaan waraaqihiisa danjirenimo u dhiibo boqorka dalkaan Iswiidhan ee Carl XVI Gustaf-ka labaad.